News - Otu nzaghachi na ọganihu nke ụlọ ọrụ anyị na Vietnam
N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị ahịa na-echegbu onwe ha banyere mmepe nke ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị na Vietnam ma dee ọtụtụ oge ịjụ maka ọganihu.
Ka ọ dị ugbu a, n'ihi ọrịa COVID-19, oge owuwu nke ụlọ ọrụ Vietnamese dị ntakịrị n'azụ, mana n'ozuzu ya, ọrụ a ka na-aga n'ihu. N'ihe gbasara iwu ụlọ, nzaghachi anyị natara ugbu a na-agwa anyị na oge owuwu ụlọ agaghị egbu oge, dị ka anyị kwupụtara. Factorylọ ọrụ Vietnamese ga-emeghe dịka emebere ya na Eprel n'afọ ọzọ.
Otú ọ dị, n'ihi nyocha siri ike nke ngwongwo ndị China na ihe ndị gwụchara nke gọọmentị US na mgbakwunye nke ụtụ isi na-echekwa mbubata na ngwongwo ndị si na mpaghara ndị na-abụghị ndị China na-emepụta, ugbu a, ndị otu anyị nke ndị ndụmọdụ ụlọ ọrụ. enyebeghị ntụziaka doro anya banyere ụkpụrụ ndị a ga-eji mee ihe maka inyefe ụlọ ọrụ akwa eletrik na Vietnam.
N'ezie, nke a bụ ihe ezi uche dị na ya. Mgbe ngwaahịa ndị ejiri ọkara kwụsịrị na China wee ziga Vietnam, site na mkpochapụ omenala ugboro abụọ, usoro usoro a ga-eweta ụgwọ nke 8-9%. Ọ bụrụ na United States na-atụ ụtụ isi nchebe na mbupụ Vietnamese anyị, uru ọnụahịa nke Vietnam anaghịzi adọrọ mmasị ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ ndị China. Ka ọ dị ugbu a, igwe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma nwere nnukwu ihe achọrọ maka inye ike, mana n'oge a, ike na Vietnam na-akawanye njọ kwa ụbọchị, na iji hụ na arụmọrụ nke ngwa ọrụ ahụ, anyị ga-ewulite ndabere anyị. sistemụ ọkụ, nke bụ nnukwu mmefu. ọ gwụla ma enwere mmụba dị ukwuu n'ọchịchọ ndị ahịa, ma ọ bụghị, ogologo oge a & nnukwu mmefu adịghị na ndepụta ego anyị dị ugbu a.
Post oge: Nov-30-2020